Chikamu chekushanya muzviverengero | Ehupfumi Zvemari
Chikamu chekushanya muzviverengero
Imwe yemasekete yakawana kutarisisa kubva kuvashambadziri mumakore achangopfuura kushanya. Iyo ibhizimusi modhi inoenda kuvandudza huwandu hwavo gore negore kusvika pakuva imwe yeanobatsira kwazvo muhupfumi hwepasi rose. Yakaparadzaniswa muzvikamu zvakasiyana senzvimbo dzekugara muhotera, vamiriri vekufamba, nzvimbo dzekuchengetedza uye nendege. Mharidzo yekupedzisira iri kupa kukurudzira kutsva kuvashambadziri vanotora nzvimbo munzvimbo dzekuchengetedza dzinomiririra chikamu chakakosha mumisika yemari. Zvese munyika nekunze kwemiganhu yedu.
Iyo yazvino data yakapihwa ne Sangano Rinoona nezve Utano Pasi pose (UNWTO) muenzaniso wakanaka wekukosha kuri kuita kutashanya muhukama hwepasi rose hwehupfumi. Mupfungwa iyi, yazvino gwaro reUNWTO rinoratidza kuti mumwedzi mitanhatu yekutanga ya2017, nzvimbo dzakatenderedza pasirese dzakatambira mamishinari mazana mapfumbamwe nemakumi masere nesere nemapfumbamwe evashanyi, mamwe mamirioni makumi matatu nematanhatu kupfuura panguva imwechete yegore rapfuura. Kukura, kuri 598% kana zvichienzaniswa negore rapfuura, kwakapfuura zvakanyanya kumusoro kwakacherechedzwa mumakore achangopfuura, zvichiita kuti nguva kubva muna Ndira kusvika Chikumi ive semester yakanakisa kubvira 36.
Iyi data inoisa hwaro hwekusarudza ino chikamu chebhizinesi seimwe yevanofarira kusarudza iyo mari yakasiyana-siyana mukati megore rino. Kusvika padanho rekuti mazhinji emasheya anomiririra ane mukana wekukwiridzira uyo mamwe misika yemasheya isipo. Zvisinei, iyo kupa kuSpain inoganhurirwa kune mashoma akanyorwa zvirevo. Semuenzaniso, Sol Meliá, NH Hoteles, Amadeus uye nendege yeAIG. Zvishoma uye hapazove nesarudzo kunze kwekuenda kumisika yepasi rese kuti uwane yakafararira uye pamusoro pezvose zvakasiyana zvinopihwa.
1 Wedzera mukushanya kwenyika dzese
2 Panorama yenyika yenyika
3 Mediterranean nzvimbo dziri kutungamira
4 Kusvika kwakakura 4%
5 Kufungisisa kwedata rekushanya pamusika wemasheya
6 Inguva yekupinda muchikamu?
Wedzera mukushanya kwenyika dzese
Sekureva kwenhau ichangoburwa yeUNWTO World Tourism Barometer, huwandu hwevashanyi vanoziviswa nenzvimbo dzakatenderedza pasirese hunoratidza kudiwa kwakasimba kwekushanyirwa kwenyika dzepasi rose muhafu yekutanga yegore ra2017. Pamwero wepasirese, vashanyi vekunze kwenyika (vashanyi vehusiku) yakawedzera 6% zvichienzaniswa nesemester imwe chete yegore rapfuura, ichidarika yakasimba uye inogara ichiita mamiriro ekukura kweanosvika 4% akacherechedzwa kubvira 2010. Huwandu hunopa yakanakisa-mwedzi mitanhatu mhedzisiro yakawanikwa mumakore manomwe apfuura kumwedzi mitanhatu yekutanga ya2017. .
Imwe dhata yekufarira inosimbisa kukosha kwenzvimbo yekushanya pasirese ndiyo iyo ine chirevo cheiyo kukura kwakasimba iyo inobata chikamu chakanaka chenzvimbo dzenyika. Mupfungwa iyi, iyo UNWTO mushumo inosimbisa kuti mhedzisiro inoenderana nekukura kwakasimba kwakanyoreswa munzvimbo zhinji uye kuenderera kwekudzoserwa kune avo vakanyoresa kudonha mumakore apfuura. Pamatunhu ese eWorld Tourism Organisation, kukura kwaive kwakanyanya kuMiddle East (+ 9%), Europe (+ 8%) uye Africa (+ 8%), ichiteverwa neAsia nePacific (+ 6%) nemaAmerica ( + 3%).
Panorama yenyika yenyika
Nezve zviitiko zvevashanyi muSpain, dambudziko hombe riri muchinetso icho dambudziko reCatalan rinogona kuva padata renyika. Mupfungwa iyi, Secretary Secretary mutsva weWorld Tourism Organisation (UNWTO), Zurab Pololikashvili, achangobva kutaura izvozvo Catalonia yakanyoreswa kuderera mukushanya pakati pe15% ne20% mukota yekupedzisira yegore. Nguva inoenderana nekukwirira kwedambudziko rekuzvimiririra uye yakave nezviitiko zvakakura mukuwedzera kusagadzikana kwezvematongerwo enyika. Kunyangwe paine chokwadi chekuti mune mamwe matunhu eSpain arikuratidzira data rakanaka kwazvo revashanyi. Nekuwedzera kunoshamisa mukugamuchirwa kwevashanyi mumwedzi ichangopfuura.
Chero zvazvingaitika, idzi dhata dzinofanirwa kuratidzwa mune chaiko kukosha kwemakambani akanyorwa pamisika yemari. Chimwe chinhu icho panguva ino, uye maererano nenhamba huru yevaongorori vezvemari, chisina kugadzikana mukukosha kwese. Izvo hazvigone kukanganwika kuti Secretary General weWorld Tourism Organisation akajekesa iyo rebound mukuuya kwevashanyi vekunze kuSpain mumakore achangopfuura. Nekuwedzera kweanosvika makumi maviri neshanu muzana, kunyangwe hazvo nhamba inonyanya kukosha ndeyekuti mwero wekukura unogona kuchengetwa mumwedzi iri kuuya.
Mediterranean nzvimbo dziri kutungamira
Sekureva kweshumo razvino neUNWTO, nzvimbo dzekuMediterranean dzakanyora kukura kwakanyanya muhafu yekutanga ya2017, sezvakaratidzwa mumhedzisiro yakanyorwa neSouthern neMediterranean Europe (+ 12%), North Africa (+ 16%) uye Middle East. (+ 9%). Maitiro aya akakurudzirwa nekuenderera mberi kwekukura kwenzvimbo zhinji munzvimbo iyi, pamwe chete nekudzokorodza kwakanyanya munzvimbo dzasangana nekuderera mumakore apfuura, senge Turkey, Egypt neTunisia.
Iyi data ipfumo rinocheka kaviri kune zvido zvekushanya kuSpain. Nekuti kune rimwe divi, zvido zvavo zvinobatsirwa nekukwira kwazvino kwechiitiko chehupfumi ichi. Nepo kune rimwe divi, iwe ungatambura iyo makwikwi kubva kune dzimwe nzvimbo munzvimbo ino yenharaunda inogona kuyera pamhedzisiro yehupfumi kubva zvino zvichienda mberi. Kumwe kuravira kunorwadza, saka, kwekushanya kwenyika, uko kune rumwe rutivi kusati kuri kuratidza zviratidzo zvekushaya simba mune chero emabhizimusi zvikamu.
Kusvika kwakakura 4%
Uye zvakare, vashanyi vepasi rese vanosvika munaJune vakawedzera ne8% muNorth Europe, 6% muWestern Europe uye 4% muCentral neEastern Europe. MuSub-Saharan Africa, vanosvika vakawedzera ne4%. Nepo chimwe chikamu, zvinoenderana nedata rakaburitswa neWorld Tourism Organisation, South Asia (+ 12%) yakatungamira kukura muAsia nePacific, ichiteverwa naOceania (+ 8%) uye Southeast Asia (+ 7%), nepo mhedzisiro yakawanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia (+ 4%) zvaive zvakasiyana.
Chirevo ichi chinoenderera, zvichinongedzera kuchokwadi chekuti kukura kwevanosvika panguva ino kwaitungamirwa ne outbound yekushanya kudiwa kubva kumisika huru sosi. Kunyanya, Canada, China, Republic of Korea, Spain, United States, France neUnited Kingdom vakaramba vachitaura kukura kwakasimba mumashandisirwo avakaita ekushanya. Mune ino semester yekutanga, kwaive zvakare nekudzora kwakasimba mukuda kubva kuBrazil neRussia Federation mushure memakore akati wandei ekuderera maererano nemari yekushandisa nevashanyi vavo kunze kwenyika.
Kufungisisa kwedata rekushanya pamusika wemasheya
Chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya ndicho chiri kuve shanduko mumisika yemari yehunhu hwesangano rekushanya. Nezve Spain, ivo vakaratidza mugore rapfuura kukura kwekutenderedza 8%. Pasina musiyano wakakura nemamwe masheya, akadai sekubhanga, kuvaka, matekinoroji matsva kana makambani einishuwarenzi. Mupfungwa iyi, tsika idzi dziri kutarisirwa pasi maererano neicho chokwadi chinowanikwa mukushanya munzvimbo dzese jogirafi. Chinhu chakafanana nezvinoitika mune mimwe misika yepasi rose uko mutengo wemakambani aya uri kunyatsofanana. Kunyangwe zvese, pane huwandu hwakanaka hwevanoongorora zvemari vanoramba vachikurudzira kutora chinzvimbo mumatanda eiyi nharaunda yehupfumi.
Zvichida chimwe chezvikamu zvebhizimusi zvine shanduko yakaipisisa mumisika yemari ndeye ndege. Asi izvi zvinonyanya kukonzerwa nemafambisirwo emakambani anoratidza mamwe eanokosha aya. Semuenzaniso, IAG mumusika weSpanish wemusika uye izvo zvisina kuputika kusvika kumusoro sekumirira kwakaitwa nevamwe vaongorori vemusika wemasheya. Kunyangwe chimwe chezvinhu zvekutsanangura maitiro aya chiri chakakonzerwa nekudzokororwa uko iyo mutengo wemafuta. Kusvika padanho rekusvika pamatanho emadhora makumi manomwe mumutengo wemafuta asina kuchena.
Inguva yekupinda muchikamu?
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti semester yekutanga yegore kazhinji inomiririra 46% yehuwandu hwevanosvika pagore rose, uye semester yechipiri inowanzo kuve nemazuva matatu kureba uye inosanganisira mwaka wakakwira mwedzi waJuly na Nyamavhuvhu kuchamhembe kwenyika. . Ichi chidimbu chakakosha cheruzivo kuti unzwisise shanduko mukukosha kwemaitiro evashanyi. Saka kuti vashoma uye vepakati varimi vanogona kugadzira imwe mhando yezano ku monetize mari yako. Kusvikira vagona kugadzirisa zvigaro kana nguva yacho yakwana yekusiya misika yezvemari.
Uye hazvigone kukanganwika kuti imwe yenguva dzinonakidza dzegore yekuvhura zvigaro mubato iri mwedzi yezhizha. Ino inguva iyo kuyerera kwevashanyi kunokura zvakanyanya munenge pasirese. Kunyanya muSpain, uko kukosha kwezvikamu kuri kukura zvakanyanya, sezvakaitika mumakore achangopfuura. Nekuvandudzwa kwenzvimbo dzekudyara dzinoumbwa neaya akasarudzika akakosha eenzvimbo kutenderera pasirese.
Chero zvazvingaitika, chichava chimwe chezvikamu zvekutarisa panguva ino. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ine inonakidza kwazvo yekuongorora mikana yekuwana mabhenefiti mukati memwedzi inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chikamu chekushanya muzviverengero
Dogecoin, internet joke kana inobudirira cryptocurrency?
Ripple Yakanyanya mari yedhijitari kana imwe chete cryptocurrency?